सोमबारदेखि विदेश जानुअघिको सबै श्रम स्वीकृति प्रक्रिया अनलाइनबाटै | Jwala Sandesh
सोमबारदेखि विदेश जानुअघिको सबै श्रम स्वीकृति प्रक्रिया अनलाइनबाटै
| प्रकाशित मितिः शनिबार, माघ १, २०७३ ::: 284 पटक पढिएको |
१ माघ, काठमाडौं । विदेश जाने श्रम स्वीकृतिका लागि ताहाचलको श्रम ग्राममा लामो लाइन बस्न बस्नुनपर्ने भएको छ । सोमबारदेखि सबैले श्रम इजाजतको आवेदन अनलाइनबाटै गर्न पाउने भएका छन् ।
अब सोमबारबाट भने ब्यक्तिगत स्वीकृति लिने र श्रमको रि-इन्ट्री गर्ने कामदारहरुको आवेदन अनलाइनबाट बुझ्न सुरु गर्ने विभागकी प्रवक्ता रमा भट्टराईले जानकारी दिइन् ।वैदेशिक रोजगार विभागले पुस ३ गतेदेखि सुरू गरेको अनलाइन सिस्टम अब ब्यक्तिगत श्रम स्वीकृतीका लागि पनि लागू हुने भएको छ । गतेदेखि म्यानपावरहरूले संस्थागत श्रम स्वीकृति लिने कमा अनलाइनबाटै गर्न पाएका थिए ।
सबै किसिमका स्वीकृितमा अनलाइन सिस्टम सुरु भएपछि श्रम इजाजतको प्रक्रियाका लागि कामदारलाई एउटै कामका लागि बारम्बार काठमाडौंको तहाचलस्थित वैदेशिक रोजगार विभागको कार्यालयमा पुग्नुपर्ने छैन । श्रमका लागि उपत्यका र उपत्यकाबाहिरका जुनसुकै ठाउँबाट पनि अनलाइन आवदेन गर्न सकिनेछ ।
सबै प्रक्रिया टुंगिएपछि श्रम स्वीकृतिको स्टीकरका लागि मात्रै कामदारहरुले पासपोर्ट लिएर विभागमा जाँदा हुनेछ । यसले कामदारलाई अहिले विभागमा हुने सास्ती घट्ने र दलालहरुको ठगी नियन्त्रण हुने प्रवक्ता भट्टराइले बताइन् ।
‘यसपछि कामदारलाई घन्टौं लाइनमा बसेर बैंकमा शुल्क तिर्नुपर्ने र फेरि विभागको कार्यालमय पुगेर पनि लाइनमै लामो समय बिताउनुपर्ने अवस्था सहज बन्नेछ’ प्रवक्ता भट्टराईले भनिन् ।
विभागले यो सिस्टमलाई ‘फरेन इम्प्लोयमेन्ट इन्फरमेशन म्यानेजमेन्ट सिस्टम’ (एर्फइआईएमएस) नाम दिएको छ । यो सिस्टमबाट पहिलो चरणमा व्यक्तिगत रुपमा विदेश जान लागेका र श्रम इजाजत नवीकरणका लागि आएका युवाको कागजी दस्ताबेज अनलाइनमा बुझ्नेछ ।
सुरुवातमा व्यक्तिगत पहलमा आएको भिसामा विदेश जान चाहेका युवाले एफइअाइएमएस सिस्टममा आफ्नो सम्पूर्ण व्यक्तिगत विवरण भर्नुपर्नेछ । यो इमेल आइडी बनाए जस्तै हुनेछ ।
यसमा आफ्नो नाम, ठेगाना, पासपोर्टका विवरण लायात सबै कानुनी व्यक्तिगत डिटेल अनलाइनमा राख्नुपर्छ । यो राखेपछि सिस्टममा पछि ‘लग इन’ हुन आफ्नो एउटा युजर र पासवर्ड पनि सेट गर्नुपर्छ । यो फेसबुक बनाएजस्तै सरल प्रक्रिया हो । इन्टरेनेटमा आफ्नो डाटा राख्न सक्नेले यसलाई सजिलै प्रयोग गर्न सक्छन् ।
प्रक्रिया के छ ?
यो आइडी बनाएपछि आफु जान लागेको देशसहित त्यहाँको कम्पनीबाट आएको डिमान्ड लेटर, भिसा लगायत डकुमेन्ट, आफ्नो पासपोर्टको प्रतिलिपीसहित आवश्यक कागजात अनलाइनमा अपलोड गर्नुपर्छ । जसलाई विभागले अफिसियल अनलाइन डकुमेन्टका रुपमा स्वीकार गर्छ ।
यसैका आधारमा विभागले यो व्यक्ति कुन देशमा, कुन कम्पनीमा, के कामका लागि जान श्रम इजाजत मागेको हो भन्ने अनलाइन विवरण प्राप्त गर्छ । त्यसअनुसार अब विभागले सो व्यक्तिको श्रम इजाजतको प्रक्रिया अघि बढाउँछ ।
अनलाइन आवेदन गरेपछि तपाईंको प्रक्रिया प्रमाणित (एप्रोभ) भएको जानकारी विभागले कामदारकै इमेलमा पठाउँछ ।
शुल्क तिर्ने सुविधा
त्यसपछि बैंकमा तोकिएको शुल्क जम्मा गर्न सकिनेछ । सोमबारपछि अहिलेजस्तो ताहाचलमै रहेका सीमित बैंकहरुका काउन्टरमा हैन, देशका ठूला ६ बाणिज्य बैंकका जुनसुकै शाखाबाट सरकारको खातामा रकम जम्मा गराउन सकिनेछ ।
विभागले झण्डै ६ वटा बैंकसँग कामदारले जहाँसुकैबाट रकम जम्मा गर्न सक्ने गरी सम्झौता गरेको छ । अहिले सीमित बैंकमा केही काउन्टरबाट मात्रै सरकारले तोकेको शुल्क तिर्नुपर्दा कामदार घन्टौं लाममा बस्नुपर्ने समस्यामा छन् ।
सबै ठाउँमा विद्युतीय हाजिरी
त्यसपछि पहिलोपटक विदेश जानेले ओरियन्टेशन कक्षा लिनुपर्नेछ । वैदेशिक रोजगारीबारे ओरियन्टेशन लिने कक्षामा विद्युतीय हाजिरी मेसिन हुन्छ । त्यहाँ तपाईले ‘थम्प्स’ गरेपछि विभागमा यो जानकारी पुग्छ ।
मेडिकलका लागि पुग्दा पनि यसैगरी विद्युतीय हाजिरी हुनेछ । मेडिकलले पनि सम्बन्धित व्यक्तिको मेडिकल रिपोर्ट सरकारको सिस्टममा पठाउँछ ।
वैदेशिक रोजगारीमा जाने व्यक्तिले गरेका बीमाका सबै रेकर्ड पनि यो सिस्टममा स्वतः जान्छ । यसका लागि विभागले बीमा कम्पनीहरुसँगको सहकार्यमा विशेष व्यवस्था गरेको छ ।
अन्तिममा ताहचलमै !
यी हरेक प्रक्रिया पुरा भएपछि सिस्टमले कामदारको इमेलमा नोटिफिकेशन पठाउँछ । यसका आधारमा कामदारले आफ्नो कागजी प्रक्रिया कहाँ पुगेको छ भन्ने सजिलै जानकारी पाउनेछन् ।
श्रम इजाजत नवीकरण गर्नेले भने आरियन्टेशन र मेडिकल गर्नुपर्दैन । विदेश गएर फर्किएकाहरुको रेकर्ड विभागको सिस्टममा हुने भएकाले यो प्रक्रिया नभिएपनि नीकवरणलाई सिस्टमले प्रमाणित गर्नेछ ।
आफ्ना सबै प्रक्रिया टुंगिएको जानकारी इमेलमा पाएपछि सेवाग्राही विभागको कार्यालयमा पासपोर्ट लिएर जानुपर्नेछ । त्यसमा श्रम अधिकारीले श्रम स्वीकृति दिएर स्टीकर टाँसिदिनेछन् ।
सहयोग माग्ने माध्यम
एफइअाइएमएस सिस्टममा बन्ने आफ्नो अनलाइन एकाउन्टबाट सरकारसँग आफ्ना जिज्ञासा र गुनासा छन् भने पनि म्यासेजका रुपमा लेख्न सकिनेछ ।
यसलाई विभागले हेरेर तपाईंलाई आवश्यक सहयोग पनि गर्नेछ । यसका लागि एकाउन्टको युजर र पासवर्ड भने तपाईंसँग सुरक्षित हुनुपर्छ । विदेशमा रहँदा आफुलाई परेका समस्याहरु सरकारलाई जानकारी गराउने यो भरपर्दो माध्यम हुनेछ ।
विभागकाअनुसार यसलाई जटिल रुपमा लिनुपर्ने कुनै कुरा हुने छैन, किनभने यो जिमेल र फेसबुक चलाएजस्तै हो । यही सिस्टमको प्रयोगबाट भविष्यमा विदेशमा वा एयरपोर्टमा नै श्रम इजाजत नवीकरणको व्यवस्था गर्न पनि सहज हुनेछ । सरकारले विदेशमा श्रम इजाजत दिने नीति लिएकाले यो सिस्टम अब सरकारको सहयोगी बन्नेछ ।